विज्ञापन र ब्राण्डको धर्म र धर्मशास्त्रको जस्तै सम्बन्धः अभय पाण्डे Media for all across the globe
विज्ञापन र ब्राण्डको धर्म र धर्मशास्त्रको जस्तै सम्बन्धः अभय पाण्डे
नेपाली एड गुरू अभय पाण्डेले विज्ञापन र ब्राण्डको धर्म र धर्मशास्त्रको जस्तै सम्बन्ध रहेको बताए।
बुधबार बिएल मिडियाले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
ब्राण्ड स्टोको कुरा बारे व्यङ्ग्य गर्दै पाण्डेले कतिपयलाई लाग्ला यो ब्राण्डको पनि स्टोरी हुन्छ?, यस्तो एउटा जाबो यो फूलको पनि स्टोरी हुन्छ? एउटा चाउचाउको पनि स्टोरी हुन्छ? भने जस्तो लाग्ला। तर सबैको स्टोरी हुनेमा उनले विश्वस्त तुल्याए।
‘म अलिकति फिलोसोफिकल हुन चाहन्छु। यो मानवीय गुण रहेछ। हामी हरेक कुरालाई मानवीयकरण गर्छौ। हामी देवतालाईसमेत चरित्र देखाउँछौ। हामी सबै कुरालाई मानवीय गुण र चरित्रले देख्छौ। हाम्रो गुणै छ सबै कुरालाई चरित्र देख्ने। बादल हेर्‍यौ भने मान्छेको आकृति दख्छौ। गाडीमा आकृति देख्छ। हाम्रो चरित्रै छ। हरेक कुरालाई आफूजस्तै बनाउने। मान्छेको जिन्दगी र ब्राण्डको जीन्दगी लगभग एउटै हो। यो हिसाबले यी दुई बिचमा धेरै सिमिलारिटी हुन्छ। किनकि हामीले आफ्नै कुरा दिएको हो त्यो ब्राण्डलाई,’ उनले भने।
जन्म मृत्यु र ग्रोथ हाम्रो आफ्नै कारणले हुने भन्दै उनले ब्राण्डको स्टोरी पनि हामी सबैले मिलेर दिने बताए। उनले स्टोरी उत्पादकले मात्र जन्माउने होइन। उत्पादक उपभोक्ता सबै मिलेर जन्माउने दाबी गरे।
‘धर्मलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो ब्राण्ड मानिन्छ। किनकि त्यो भन्दा शक्तिशाली अर्को कुनै ब्राण्ड छैन। हरेक ब्राण्डको एउटा उद्धेश्य के हुन्छ भने एउटा यस्तो अन्धभक्त पैदा गरौं यस्तो जमात पैदा गरौ। जसले जस्तोसुकै अवस्थामा यसको फलो गरिरहोस्। जस्तो कि धर्म,’ उनले भने।
धर्म जस्तो त कुनै पनि ब्राण्ड हुनसक्दैन भन्दै उनले हरेक ब्राण्डको प्रयत्न आफ्नो ब्राण्डलाई धर्मसरह बनाउने हुने स्पष्ट पारे। उनले जति पनि ब्राण्डहरू बजारमा आएपनि हरेकको चाहना आफूलाई धर्मजस्तो ब्राण्ड बनाउनु रहेको तर्क गरे।
‘यस्तो फलोअर्स बनाउनुपर्‍यो कि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नडगमगाउनुहोस्। अर्को धर्मप्रति नलागोस् वा अर्को ब्राण्डतिर नलागोस्’, उनले भने।
प्रकाशित मिति: : 2020-01-09 08:51:16
‘श्रमबिना सफलता मिल्दैन’
ब्राण्ड स्टोरीः शुद्धता र ताजाको ‘प्रतीक’ नोभा मिल्क
५० हजार लगानीबाट सुरु भएको नेपा डान्स एकेडेमी यसरी बन्यो मुलुककै ठूलो डान्स स्कुल
ब्राण्ड स्टोरीः संघर्ष गर्दागर्दै ‘लिडर’ भएको कम्पनी डिशहोम
ब्राण्ड स्टोरीः युवा पुस्ताको रोजाई बिजी बी
उत्पादनप्रति उपभोक्ताको अपनत्व फिल गराउन ब्राण्ड स्टोरी आवश्यक छः बलराम जाना
अमेरिकामा लुक्न छोडे नेपाली, २०१९ मा लुक्नेको संख्या ६७४ मात्रै !